SOMALITALK - CANADA
MUSIIBOOYINKEENA MAXAA U SABAB AH
Siciid Cali Axmed | Saidahmed67@aol.com | Canada
Su’aasha aan cinwaanka uga dhigay maqaalkani waa su’aal laga yaabo in ay iswaydiinayaan dadka qaarkood. Sidaas oo kale waxa laga yaabaa in inbadan oo Muslimiinta ahi ay iswaydiiyaan halka uu ka yimid dib u dhaca dhaqaale, awoodeed iyo bulsho ee umadoooda ku habsaday. Ilaahay waxa uu Quraanka ku sheegay in Muslimiintu ay yihiin umada ugu khayrka badan umadaha oo dhan; waxa laga yaabaa in qofku marka uu xaalada ay Muslimiinta maanta ku suganyyihiin u fiirsado in uu is waydiiyo halka uu ka dhacay khayrkii uu Alle ku sheegay umadan?.! Jawaabaha su’aalahaa iyo kuwo la midka ah ee laga yaabo in ay is waydiinayaan Muslimiinta qaarkood ayaan isku dayi doonaa in aan kaga jawaabno maqaalakan iyo kuwo ka danbeeya hadii Alle yidhaa.
Musiibadu xagay ka socotaa
Qofkasata oo aragti furan ku eega kitaabka Quraanku waa ay fududahay in uu si fudud jawaab ugu helo su’aalahan. Dhibi hadii ay umad amaba qof ku dhacdo, sababta ay dhibtaasi ku dhacday Islaamku waxa uu u celinayaa qofkaas ama ummadaas. Dhibi haday idinku dhacdo waa midhihii camalkiina weeye sharciga Ilaahay. Sidaas daraadeed iyadoo kooban jawaabtu waxa weeye dhibta ku habsatay Muslimiintu waa mid ay ku kasbadeen camalakooda. Jawaabtaa kooban ka dib waxaan soo bandhigi qaar ka midda asbaabaha ugu waaweeyn ee aan is leeyahay waxa ay asaas u yihiin dhobaatooyinka Muslimiinta.
Islaamku waa nidaam taabanaya dhamaan dhinacayda kala duwan ee nolasha qofka iyo ummada. Islaamku waa diin iyo dawlad. Waa dhaqaale iyo kayd. Waa akhlaaq iyo dhaqan. Waa quwad iyo ciidan. Waa cilmi iyo aragti. Waa caqiido iyo cibaado toosan. Waa cadaalad iyo garsoor dulmi ka hufan. Sidaas oo kaleeto Islaamku waa maamul iyo xukun. Islaamku waa horumar iyo barwaaqo. Fahankaas toosan ee Islaamka waxaad odhan kartaa wuu ka lumay in badan oo Muslimiinta ah, taa oo keenatay in fahankooda diintu uu noqdo mid ku kooban Salaad, Soon, Zako iyo Xaj kuwaas oo aan waliba sidi la rabay loo gudan. Faham gaabnidanina waxa ay ka mid tahaya musiibooyinka ugu waaweeyn ee dib u dhaca u keenay Muslimiinta..
Khilaafaad iyo is jiidjiidad.
WIIL UBAAHAN GARGAAR CAAFIMAAD
Wiilkan yar wuxuu ku dhasahay boosaaso Jan. 1995kii isagoo lafaha maduxu kala keceen taas oo ay sababtay biyo badan oo madaxa kaga jirey, wuxuuna u baahana yahay gargaar degdeg ah.
Khilaafaadka ku yimaada nacaybka shaqsi ama koox, sidaas oo kaleeto khilafaadka ku yimaada tacasubka indhaha la ee loo tacsubo nafta, qabiilka, qawmiyada iyo kooxdduba waa mid natiijadiisu ay tahay kala daadsanaan. Waa qaacido Ilaahiya in natiijada ka dhalata khilaafaadka noocani ay tahay fashil iyo daciifnimo. Hadaad indhaha furtid oo aad u fiirsato dhibaatooyinka haysta Muslimiintana waxaan kaa qarsoonaanayn in qayb badan oo dhibaatooyinkooda ah uu ku yimid is nacaybaka iyo is jiid jiidadka dhexdooda. Tusaalena waxaa kuugu filan Soomaalida iyo wadamada carabta oo midiba mida kale uu lugta hayo. Kaartoon nin Muslimi uu sawiray oo aan mar hore ku arkay joornaal ayaa waxa uu cabirayay sawirka dhabta ah ee Muslimiinta. Waxaa isku ag sawirnaa laba sawir oo midi ka turjumayo xaalada dadka aan Muslimiinta ahayn ka kalana waxa uu cabirayay xaalada Muslimiinta. Si gaaban sawiraagu waxa uu isku ag sawiray afar nin oo labana ay Muslimiin yihiin, labana aanay Muslimiin ahayn. Laba kastaba waxa ay hoos joogaan geed tufaax ah. Labada aan Muslimiinta ahayn mid ayaa midka kale garabkiisa fuulaya, wuxuuna si fudud u soo goosanayaa tufaaxii geedka saarnaa. Dhinaca kale labadii Muslimiinta ahaa marka uu midi gacanta kor u taago si uu u soo goosto xabada tufaaxa ah, kii kale ayaa guntiga hoos u soo jiidi. Xaqiiqda Muslimiinta waa sidaas uu sawirkaasi soo bandhigay. Caalamka maanta kuwii aan muslimiinta ahayni way is caawin halka kuwii muslimiinta ahaa ahaa uu midba midka kale turunturaynayo. Shakina ma laha umad xaalkoodu sidaas yahay in fashil ku dhacayo.
Diinta islaamku waxa weeye diin waxyigeedii ugu horeeyay uu ahaa amar la is farayo akhriska oo calaamad u ah cilmiga. Taariikhdii dahabiga ah ee Muslimiintu waxa ay ahayd markii ay Muslimiintu ku foofeen meelaha cilmiga lagu barto. Waqtigaas waxa ay fahmeen in horumarka ummada uu ku jiro horumarka cilmigooda. Taariikhdii ay yurub ku jirtay casrigeedii dib u dhaca waa taariikhdii ay Muslimiintu heerarka sare ka gaadheen dhamaanba furuucda kala duwan ee culuunta. Islaamka, cilmigu ma kala laha mid aduunyo iyo mid aakhiro. Mid kastaba waa waajib ay tahay in la barto. Markii ay muslimiintu faralkan ka gaabiyeen oo ay ogolaadeen in umadaha kale ay dhaxlaan cilmigii awoowyaashood, iyaguna ay noqdaan dawadayaal faraha laabtay ayaa Ilaahay duli dusha ka saaray. Jaahilnimadu waxa ay noqotay calaamada in badan oo Muslimiinta ah lagu garto. Sidaa daraadeed jaahilnimadu waxa ay iyana ka mid tahay musiibooyinka waaweeyen ee hortaagan horumarka Muslimiinta.
La soco qaybta labaad………
Siciid Cali Axmed
... QORAALADII HORE EE SICIID
Faafin: SomaliTalk.com | July 5, 2003
Waa wiil yar oo Somali ah oo nayl yar dhabta kuwata xilli nabadana dhex jooga Bilicda dhulka Soomaaliya. Akhri